मानिस ह,रा,एको सुचना ! भेट्नेलाई बीस हजार, सबै सामु पुग्ने गरि सेयर गरौ – Taja Khawar
मानिस ह,रा,एको सुचना ! भेट्नेलाई बीस हजार, सबै सामु पुग्ने गरि सेयर गरौ
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: १६:५४:२९
इटहरी / समय सगैँ ठ,गहरुले ठ,ग्ने नयाँ नयाँ तरीकाको प्रयोग गरी ठ,ग्ने क्रम बढ्दो छ । यस्तै ठ,गीको सि,का,र बने झापा भद्रपुर घर भएका राजेन्द्र लिम्बु । लिम्बुको घरमा गाउकै भतिज साईनो पर्ने सुदिप राई बास बस्न आए गाउकै भतिज भएकाले उनले पनि सहजै उनलाई पाहुनाको रुपमा स्विकारे तर सुदिपलाई पाहुनाको रुपमा स्विकारेकोमा राजेन्द्रलाई भारी पर्यो । घर नजिकैको होटलमा खाना खाएका ग्राहाकलाई सुदिपले मेरो घर भन्दै राजेन्द्रको घर देखाएर एक छिनको लागि भनेर मोटरसाईकल लिएर भा, गे । आफ्नो घरमा बस्ने ब्यक्तिले त्यसरी अर्काको मोटरसाईकल लिएर भा,ग्नाले आफूसमेत अप्ठ्यारोमा परेको राजेन्द्रले बताउछन् ।
कतै अप्ठ्यारोमा परेर स, X म्प, X र्कमा नआएको हो कि भनेर ३,४ दिन सम्म पर्खिएको तर फर्केर नआएको राजेन्द्रले बताए । छिमेकिको मोटरसाईकल लिएर भा, गेका सुदिप फर्केर न,आएपछि मानिस ह, X रा, एको सुचना भनेर सुचना नै जारी गरेर सुदिप सगँ ठगिएकाहरुको स, X म्प, र्क नं समेत सुचनामा उल्लेख गरीएको र जिल्ला प्रहरी कार्यलय झापामा उजुरी दिए पनि अहिले सम्म केही पत्ता लागेको छैन ।
राजेन्द्रका अनुसार ठ, गि गर्ने सुदिपको बाबुको पनि मृत्यु भईसकेको र आमाले पनि दोस्रो बिबाह गरेको हुनाले पनि ठ, ग सुदिप सगँ स, X म्प, X र्क हुन कठिन भएको हो । भद्रपुरबाट भा, गेका सुदिपले इटहरीमा पनि एक जनालाई ठ, गेर धनकुटा भा, गेको खबर आफुले पाएको राजेन्द्रले बताए ।
यस्तै ठ, गीको सि, का, र बने इटहरी ६ बीपी चोकका रोहित दास । इटहरी बीपी चोकका दासले साथि बनेर घरमा बास बस्न एक ब्यक्ती आएको र राती नै मोबाइल, घडी लिएर फ,रा,र भएको बताए। उनले यसरीनै लामो समय देखि ठ,गी गर्दै आएको थाहा पायौ दास भन्छन । उनले अन्य घरमा पनि ठ,गी गर्न सक्छन सचेत रहौ उनी थप्छन ।alt
Last Updated on: June 3rd, 2021 at 4:54 pm